Who benefits in Myanmar? First Past the Post v Proportional Representation in Elections
Duringarecent trip to Myanmar, I was repeatedly asked about electoral systems. With the upcoming election, the idea of PR – Proportional Representation – is back on the agenda. But who would this benefit in Myanmar?
Currently the electoral system in Myanmar is First Past the Post (FPTP), also known as plurality/majority. A First Past the Post electoral system is likeahorse race – whoever gets to the line first wins. Except there are no prizes for second or third. It is winner takes all.
A Proportional Representation electoral system allocates seats according to the proportion of the vote won. For example, if your party wins ten percent of the vote, then it would get ten percent of the seats.
Mixed electoral systems are increasingly common in Asia. They combine First Past the Post and Proportional Representation, so for example, in Nepal, 60% of the seats are by First Past the Post and 40% by Proportional Representation. This is one option for Myanmar.
Political theory has it that First Past the Post systems exaggerate electoral majorities, lead to two-party systems and majority government. It follows that governments are more stable and decisive.
According to the theory, Proportional Representation systems are more inclusive and better represent ethnic minorities. Because of this, they tend to lead to multiparty systems and coalition governments. Therefore, governments are unstable and prone to deadlock.
But it does not always work like this. There are two major factors that affect these outcomes. One is federalism, and the other is demographics.
Firstly, inafederal system, smaller ethnic and regional parties tend to haveastrong presence in certain locations (as they can form government in the states and regions). This means that they will still win seats underaFirst Past the Post system.
Secondly, when ethnic communities are clustered – live in the same area – ethnic minorities can often gain more representation under First Past the Post than Proportional Representation. If there are ethnic parties and ‘clustered communities’, then First Past the Post serves ethnic minorities quite well.
We need only look to Myanmar’s neighbour India, to see this play out. It hasaFirst Past the Post system (plus some appointed and communal seats), yet ethnic and regional parties have fared well right across the country. Even under Modi, there isacoalition government.
Very similar conditions exist in Myanmar. Many ethnic nationalities live in close proximity to each other and so representatives from those nationalities can and do win seats. Similarly, federalism means that ethnic and regional parties can lead governments in states and regions and remain politically important on the national stage.
The legacy of military rule in Myanmar has affected the number of relevant political parties (those that can form government). But how different would the situation be if it wereaPR system?
In the 2015 election, the NLD won 57% of the vote (in the lower house) and almost 80% of the elected seats. This majority would probably go down. The USDP won over 28% of the seats but less than 10% of the elected seats. Its proportion would go up. The ethnic parties’ representation may not change much.
The key here is the size of the Proportional Representation constituency (e.g. nationwide, state/region-wide, or smaller) and the threshold (cut-off). For example, when Sri Lanka first moved to PR it establishedathreshold of 12.5% - i.e. you had to win at least 12.5% of the vote inaconstituency to get any seats. This was intended to shut out minor parties. It was later shifted to 5%, but Sri Lanka still hasamostly two-party system, with both parties dominated by the elite of one particular ethnic group.
If the threshold for the 2015 Myanmar election were say, 3%, and the entire country formed one constituency, then notasingle ethnic party would have wonaseat in the lower house of parliament. The seats would have all been divided up between the NLD (around 2/3s) and the USDP (around 1/3). Smaller constituencies would yield different results, but I have not done the maths.
Although there is not likely to be any electoral reform before the current election, more work on what changes to the electoral system would mean in practice is needed. In Asia, the outcomes do not always follow the theory.
မြန်မာ့ ရွေး ကောက် ပွဲ ဘယ်သူ ပို အမြတ် ထွက် နိုင် မလဲ ?
အ နိုင် ရသူ အကုန် ယူ စံနစ် (သို့ မဟုတ်) အချိုး ကျ ကိုယ် စား ပြု ရွေး ကောက် ပွဲ စံနစ်
မြန် မာ နိုင် ငံ ရဲ့ ရွေး ကောက် ပွဲ စံနစ် အကြောင်း လတ် တ လော သွား ရောက် ခဲ့ တဲ့ မြန် မာ ပြည် ခရီး စဉ် အတွင်း မှာ အကြိမ် ကြိမ် မေး ခွန်း ထုတ် ခဲ့ ပါတယ်။ လာ မဲ့ ရွေး ကောက် ပွဲ မှာ တော့ အချိုး ကျ ကိုယ်စား ပြု စံနစ် (PR) တကြော့ ပြန် စဉ်းစား စရာ ဖြစ်လာ ခဲ့ တာ တွေ့ ရပါတယ်၊ ဒါ ပေမဲ့ အဲဒါက ဘယ် သူ တွေကို အကျိုး ပြု စေမှာပါလဲ။
လော လော ဆယ် မြန်မာ့ ရွေး ကောက်ပွဲ စံနစ် မှာ တော့ အနိုင် ရသူ အကုန် ယူ စံနစ် (First Pass the Post) ကို ကျင့် သုံး နေ ပါတယ်၊ အဲဒါကို မဲ အများစု ရသူ အနိုင် ယူ တဲ့ စံနစ် လို့ လဲ လူသိ များပါတယ်။
အနိုင် ရ သူ အကုန် ယူ စံနစ် ဟာ မြင်း ပြိုင် ပွဲ နဲ့ အလားသ ဏ္ဍန် တူ ပါ တယ်၊ အရင် ဆုံး ပန်း ၀င် တဲ့ သူ က အနိုင် ရ တာပါပဲ၊ ဒု တိ ယ နဲ့ တတိ ယ မြင်း တွေ အ တွက် တော့ ဘာ ဆု မှ မရှိ ပါဘူး။ ဒါ ဟာ နိုင် တဲ့သူ အကုန် ယူ တာ ပါပဲ။
အချိုး ကျ ကိုယ် စား ပြု စံနစ် ကတော့ အမတ် နေ ရာ ရွေး ချယ် ရာမှာ ရတဲ့ မဲ အချိုး အစား ပေါ်မှာ မူ တည် ပြီး ရွေး ပါတယ်။ဥ ပမာ အား ဖြင့် သင့် ရဲ့ ပါတီဟာ ၁၀ ရာ ခိုင်နုန်း မဲ ရတယ် ဆို ပါတော့၊ သင့် ပါတီဟာ လွတ် တော်မှာ ၁၀ ရာခိုင် နုန်း အမတ် နေ ရာ ရရှိ မှာ ဖြစ် ပါတယ်။
အာရှ မှာ တော့ ရော ထွေး တဲ့ ရွေး ကောက်ပွဲ စံနစ် တွေ အသုံး ပြု တာ တွေ့ နေမြင် ကြပါပဲ၊၊ အနိုင်ရသူ အကုန် ယူ စံနစ် နဲ့အချိုးကျ ကိုယ် စား ပြု စံနစ် တွေကို ပေါင်း စပ် အသုံး ပြု ကြပါတယ်၊ ဒါ ကြောင့်
ဥပမာ ပြ ရရင် နီ ပေါ နိုင်ငံဟာ ၆၀ရာ ခိုင် နုန်းသော အမတ် နေ ရာ တွေကို အနိင် ရ သူ အကုန် ယူ စံနစ်
နဲ့ ရွေး ချယ် ပြီး ၄၀ ရာနုန်း ကိုတော့ အချိုးကျ ကိုယ်စား ပြု စံနစ် နဲ့ ရွေး ချယ် ပါတယ်။ ဒါ ဟာ မြန်မာ ပြည် အတွက် လဲ ရွေး ချယ် စရာ နောက် တ မျိုး ဖြစ် နိုင် ပါတယ်။
နိုင် ငံ ရေး သဘော တရား အရ တော့ အ နိုင်ရ သူ အကုန် ယူ စံနစ် ဟာ အများစု ကို ချဲ့ ထွင် စေ တာဖြစ် ပြီး အများစု ရ တဲ့ ပါတီ က အစိုး ရ ဖြစ် တဲ့ နှစ် ပါတီ စံနစ် ကို ဦးတည် သွား စေ ပါတယ်၊ အကျိုးဆက် အားဖြင့် အစိုးရ တွေ ဟာ ပို ပြိး တည် ငြိမ် ကာ ဆုံးဖျက်ချက် လဲ ကောင်းကောင်းချမှတ် နိုင်ပါတယ်။
သ ဘော တရား အတိုင်း ဆိုရင် တော့ အချိုး ကျ ကိုယ်စား ပြု စံနစ် ဟာ အား လုံး ပါဝင် ခွင့်ပို မို ပေး တဲ့ အတွက် တိုင်း ရင်း သားလူ နဲစု တွေ အတွက် ကိုယ်စား ပြု မှု ပို ရစေ ပါတယ်။အဲဒါ ကြောင့် ပဲ တိုင်း ရင်းသားတွေက ပါတီစုံ စံနစ် နဲ့ ညွန့် ပေါင်း အစိုးရ ပုံစံမျိုး ကို အားသန် ကြ တာပါ။ ဒါ ကြောင့် လဲ အစိုးရ တွေ ဟာ မတည် မငြိမ် ဖြစ် ကြပြီး ဖြေရှင်း ရခက် တဲ့ အကျပ် အတည်း မျိုး ကြုံ ရ တတ် ပါတယ်။
ဒါ ပေမဲ့ ဒီ သဘော တရား အတိုင်း တော့ အမြဲ တမ်း မဖြစ် တတ် ပါဘူး၊ ဒီ နေရာ မှာ အဲဒီ ရလဒ် တွေ ကို
အကျိုး သက် ရောက် စေ တဲ့ အဓိ က အကြောင်း ချက် နှစ် ခု ရှိ ပါတယ်။ တခုက ဖက် ဒရယ် စံနစ် ဖြစ် ပြီး နောက် တခုက တော့ လူ ဦးရေ ပျံ့ နှံ့ တည် ရှိ ပုံပါ။
ပထမ အနေ နဲ့ဖက် ဒ ရယ် စံနစ် မှာ လူ မျိုးစု အငယ် တွေ နဲ့ဒေသ ခံ ပါတီ တွေဟာ ဒေသ အချို့ မှာ အား ကောင်း ပြီး တည် ရှိ နိုင်ပါတယ်။( ပြည် နယ် တွေ မှာ အစိုးရ ဖွဲ့ နိုင် ပါတယ်၊). ဆို ရရင် သူ တို့ ဟာ အနိုင်ရသူ အကုန် ယူ စံနစ် အား ဖြင့် မဲ နေရာ တွေ ရနိုင် ပါတယ်။
ဒုတိ ယ အား ဖြင့်တော့၊ လူ မျိုးစု ငယ် တွေ ဟာ ဒေ သတခု ထဲ မှာ ပဲ အစု လိုက် ပျံ့ ကျဲ ပြီး ရှိ နေ တဲ့အခါ မျိုး မှာ တော့ သူ တို့ အ တွက် ကိုယ်စား ပြု မှုကို အချိုး ကျ စံနစ် ထက် စာ ရင် အနိုင်ရ သူ အကုန် ယူ တဲ့ စံနစ်က ပို ပြီး မကြာ ခဏ ရစေ မှာ ပါ။ အကယ် ၍ တိုင်း ရင်း သား ပါတီ တွေ ဟာ လူ မျိုးစု တွေ ပျံ့ ကျဲ တည် ရှိ တဲ့ ဒေသ မှာ အ နိုင် ရသူ အကုန် ယူ စံနစ် က ကောင်း စွာ အကျိုး ဖြစ် စေပါလိမ့်မယ်။
ကျွန် တော်တို့ အိမ် နီးချင်း အိန္ဒိယ နိုင်ငံရဲ့ ရွေး ကောက် ပွဲ စံနစ် ကို ကြည့်ဘို့ လိုပါမယ်။ သူ့ မှာ အ နိုင်ရသူ အကုန် ယူ စံနစ် ကျင့်သုံး ပါတယ်၊( အချို့ ခန့် အပ်ထားတဲ့ အမတ် နဲ့ သီးသန့် နေရာ အပါအ၀င်) ၊ တိုင်း ရင်းသား နဲ့ ဒေ သခံ ပါတီ တွေ ဟာ မျှတ တဲ့ အခွင့်အ ရေး တွေ တ နိုင်ငံ လုံး မှာ ရရှိ ပါတယ်။ လက်ရှိ ၀န် ကြိး ချုပ် မိုဒီ လက် ထက် မှာ တောင် မှ သူ တို့ ဟာ ညွန့် ပေါင်း အစိုး ရ ပုံစံမျိုးရှိ ပါတယ်။
အိန္ဒိ ယ နဲ့ အလွန် တူ တဲ့ အနေ အထား မျိုး မြန်မာ ပြည် မှာလဲ ရှိ ပါတယ်။ တိုင်း ရင်း သားလူ မျိုး စု အများ အပြား ဟာ အချင်းချင်း နီး ကပ် စွာ နေ ထိုင် နေ ကြ ပြီး သူ တို့ ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ် တွေ ဟာ လဲ အ မတ် နေ ရာ ရနိုင် ပါတယ်။ ထို နည်း တူစွာ ပဲ၊ ဖက် ဒရယ်စံနစ် အရ တိုင်း ရင်းသား နဲ့ ဒေ သခံပါတီ တွေ ကလဲ ပြည် နယ် တွေ မှာ အစိုး ရကို ဦးဆောင် နိုင် ပြီး အမျိုးသား အဆင့် မှာလဲ နိုင်ငံရေး အရ အရေး ပါမှု ကို ထိမ်း ထား နိုင် ပါတယ်။
စစ် အုပ် ချုပ်ရေး ရဲ့ အ မွေ ကလဲ ဆီ လျှော် တဲ့ နိုင်ငံရေး ပါတီ တွေ အ ရေ အတွက်( အစိုး ရ ဖွဲ့ နိုင်လောက် တဲ့ ) ကို ထိ ခိုက် စေ ခဲ့ ပါတယ်။ ဒါ ပေမဲ့ အချိုး ကျ ကိုယ်စား ပြု စံနစ် နဲ့ ဆိုရင် အခြေ အ နေ ဘယ်လို ရှိ မယ်ဆိုတာ ကတော့ မေးစရာပါ။
၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေး ကောက်ပွဲ မှာ အမျိုးသား ဒီ မို ကရေ စီ အဖွဲ့ ချုပ် က ပြည်သူ့ လွှတ် တော် မှာ ၅၇ ရာ ခိုင်နုန်း မဲ အနိုင် ရခဲ့ပြီး ဒါ ဟာ ရွေး ချယ် ခဲ့တဲ့ အမတ် နေ ရာ တွေ ရဲ့ ၈၀ ရာခိုင်နုန်း နီးပါးပါ။အဲဒီ အများစု အနိုင် ရမှုဟာ ကျ ဆင်း ကောင်း ကျ ဆင်း နိုင်ပါတယ်။ ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီ ကတော့ ၂၈ ရာနုန်း မဲ ရခဲ့ ပြီး အမတ် နေ ရာရဲ့ ၁၀ ရာနုန်း အောက် ပဲ ရှိ ပါတယ်။ အဲဒီ အချိုး အစားက တော့ တက် လာ ပါမယ်။ တိုင်း ရင်းသား ပါတီ တွေ ရဲ့ ကိုယ်စား ပြု မှုက တော့ များများစားစား ပြောင်း လဲ မှာ မဟုတ် ပါဘူး။
ဒီ နေ ရာမှာ အဓိ က ကျ တာ ကတော့ အချိုးကျ ကိုယ်စား ပြု စံနစ် အသုံး ပြုမဲ့ မဲ ဆန္ဒ နယ် ရဲ့ အရွယ် အစား( ဥပမာ- တိုင်းပြည် အနှံ့ ၊တိုင်း၊ပြည် နယ်၊ ဒေသ ဒါ မှ မဟုတ် ပို၍သေးငယ်သောနေရာ) နဲ့ အနဲဆုံး နိုင်ရမဲ့ ကန့် သတ် ချက် တို့ ပဲဖြစ် ပါတယ်။ ဥပမာ အားဖြင့် သီရိလင်္ကာ နိုင်ငံမှာ ပထမ ဆုံး အချိုးကျ ကိုယ်စား ပြု စံနစ် ပြောင်း တဲ့အခါ ကန့် သတ် ချက် ကို ၁၂.၅ ရာခိုင်နုန်း သတ် မှတ် ခဲ့ ပါ တယ်။ ဆိုလိုတာ ကသက် ဆိုင်ရာ မဲဆ န္ဒ နယ် မှာ အ မတ် တ နေ ရာ ရဘို့ အတွက် သင် ဟာ အနည်း ဆုံး ၁၂.၅ ရာ နုန်း မဲ ရရှိ ဘို့ လိုပါတယ်။ အဲဒါ ကတော့ ပါ တီ အသေး လေး တွေ ကို ပိတ် ပင် ဘို့ ရည် ရွယ် ခဲ့ တာ ဖြစ် ပါတယ်။ ဒါ ကို နောက် ပိုင်း မှာ ၅ ရာ နုန်း ထိ လျှော့ ချ ခဲ့ ပေမဲ့ သီ ရိလင်္ကာ ဟာ ပါတီ နှစ် ခု သာ လွမ်း မိုးတဲ့ စံနစ် ရှိ နေ ဆဲပါ။ ပါတီ နှစ် ခု စလုံး မှာလဲ အဓိက တိုင်း ရင်းသား အုပ်စု ရဲ့ ရေပေါ် ဆီ လူ တန်းစား တွေက လွှမ်း မိုး ထားဆဲ ဖြစ် ပါတယ်။
အကယ် ၍ ၂၀၁၅ ရွေး ကောက် ပွဲ မှာ အနည်း ဆုံး နိုင် ရ မဲ့ ကန့် သတ် ချက် က ၃ရာ နုန်း ဖြစ် ပြီး တိုင်း ပြည် တခု လုံး ကို မဲဆန္ဒ နယ် တနယ် အဖြစ် သတ် မှတ် ခဲ့ မယ် ဆို ကြ ပါဆို့ ၊ ဒါ ဆို ပြည် သူ့ လွှတ် တော် မှာ တိုင်း ရင်း သား ပါတီ တခု မှ အနိုင် ရ ခဲ့ မှာ မဟုတ် ပါဘူး။ နေ ရာ အား လုံး အန် အယ်ဒီ( ၃ ပုံ နှစ် ပုံ ခန့် ) နဲ့ကြံ့ ခိုင် ရေး ပါ တီ(၃ ပုံ ၁ ပုံ ခန့် ) တို့ က ခွဲ ယူ ပြီး ဖြစ် နေ ခဲ့မှာပါ။ မဲဆန္ဒ နယ် အသေး လေး တွေ မှာ တော့ အ ဖြေ တမျိုး ထွက် နိုင် ပါတယ်၊ ဒါ ပေမဲ့ စာ ရေး သူ အနေ နဲ့ တွက် ချက် မကြည့် ရ သေး ပါဘူး။
လာ မဲ့ ရွေး ကောက် ပွဲ မ တိုင် ခင် ထိ ရွေး ကောက် ပွဲ မူ ၀ါဒ ပြောင်းလဲ မှု တစုံ တရာ ရှိ မယ် လို့ မထင် ရ ပေမဲ့ လက် တွေ့ မှာ ရွေး ကောက် ပွဲ စံနစ် အ ပြောင်း အလဲ တွေ လုပ် ဘို့ အများကြီး လို အပ် နေတာ ဖြစ် ပါတယ်။ အာ ရှ တိုက် မှာ တော့ တကယ့် ရလဒ် တွေ ဟာ အမြဲတမ်း လိုလို သဘော တရား သီ အိုရီ တွေ နဲ့ကိုက် ညီ လေ့ မရှိ ပါဘူး။